အစည်းဝေးတစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? | Mg Ogga's Notes
မေးခွန်းမေး– အစည်းဝေးမှာ ဆွေးနွေးချက်တွေ ကို နားမည်ရင် မှရှင်းရင် ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူကလည်း ရှင်းသလားဆိုတာ ကို ပြန်ပြန်ပြီး မေးနေသင့်ပါတယ်။ ဆွေးနွေး သူများရဲ့ ပြောစကား ဆိုလိုရင် ကို အနက်ပြန်ကောက်ပြီး ဒီလို ဆိုလိုတာလားဆိုတာ အမြဲတစေမေးနေသင့်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အတည်ပြု– ဒီလို နည်းလမ်းသုံးပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို သေချာ အတည်ပြုနိုင်ပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း သေသေချာချာ သဘောပေါက်ဖို့ နဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း အလုပ်လုပ်ဖို့ ကို ဘယ်သူတာဝန်ယူမယ်၊ ဘယ်အချိန်ပြီးမယ်၊ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်မယ်၊ ဘာတွေလိုတယ် ဆိုတာ ကို သေသေချာချာ ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်။ နောက် အားလုံး သဘောတူလားသေသေချာချာ မေးသင့်ပါတယ်။ ထောက်ခံပါ ထောက်ခံပါတယ် ပေါ့ဗျာ J
မတတ်ရောက်နိုင်သူတွေကို မှတ်တမ်းပေးပို့– အစည်းဝေးတစ်ခပြီးသွားပေမဲ့ အစည်းဝေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ကတော့ မပြီးပြတ်သေးပါဘူး အစည်းဝေးမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အချက်ချက်တွေ ကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အစည်းဝေး ပျက်ကွက်သူများဆီ အဖွဲ့ဝင်များဆီ ကို ပေးပို့ရပါမယ်။ ထိုမှသာ အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ အစည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် ပျက်ကွက်သူတွေလည်း အစည်းဝေတက်ရောက်သကဲ့သို့ သိရန်ဖြစ်ပါတယ်။
June 27, 2013 in လူမှုဖွံဖြိုးရေး, ဆောင်းပါး. Tags: OD
← မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ပါ ချမ်းငြိမ်းဖြူ(ခ)ဂျစ်တူး(ခ)ခြူး(ခ)အရိုး ရေ……
ညီကိုတို့ သဘောတူလျက် ပေါင်းဖော်ကြသည်မှာ……… →